Warqad mahad-celin ah oo kumannaan qof ka oohisay - BBC News Somali
Warqad uu macmiil faraxsan u soo qoray shirkad iibisa mashiinta VHS ee cajaladaha lagu daawado ayaa lagu wadaagay baraha bulshada, waxayna sababtay inay dadku ka hadlaan sheekooyinka la xiriira naxariista.
"Isheyda ayay qabatay sababtoo ah iimeylada aan badanaa helo waa xayeysiis amaba biilal, balse tani waxay ahayd mid gacan lagu qoray," Matt Shoukry ayaa sidaasi u sheegay BBC.
"Waxaa aad ii cajabisay dareenka uu ninkan akhyaarka ah ku muujiyay warqadda, iyo sida ay uu ii soo jiitay," Matt, ayaa sidaasi yiri.
Haweenay boolis ah oo naas nuujin u samaysay ilmo la soo tuuray
"Waxaan dhowaan helay cajalado badan oo VHS ah waxaana doonayay inaan arko waxa ku duuban waxaanse ogaaday inaanan haysan mashiinta lagu daawado. Sidaas darteed waxaan booqday EBay markii ugu horreysay waxaana ku arkay waxaad haysaan".
Waad ku mahadsna tahay daryeelkaaga iyo dadaalkaaga."
"Waxaan daawaday cajaladaha xafladdii la ii sameeyay markii aan howlgab noqday 25 sano kahor, taas oo aan weligey arkin. Cajiib, waynu yaryareyn. Kaddibna waxaan daawaday cajaladda arooskeyga oo ay joogeen dhammaan qoyskeyga iyo saaxiibbadey, badankooda ma joogaan. Kaddibna safar ku saabsanaa cayaarta barafka, carruurta oo soo koraysa, safarrada, iyo tan ugu muhiimsaneyd oo ah sida uu qoyskeygu u ballaartay. Cajaladuhu mid walba tan kale way ka xiiso badneyd. Adigaa ku mahadsan inaad iibiso mashiinta VHS,"
"Waxaan u maleeyay inaad mahadin doonto sida uu qof ugu raaxeystay qalab lagaa iibsaday."
Xigashada Sawirka, MATT SHOUKRY
Warqadda ayaa aad loogu wadaagay baraha bulshada
"Lama filaneynin balse aad ayay u wanaagsaneyd, sidaas darteed waxaan go`aansaday inaan dunida la wadaago," Matt ayaa sidaasi u sheegay BBC. "Waxyaabo badan oo aan habbooneyn ayaa maanta dunida ka jira, waa wax lagu farxo in la helo wax wanaagsan oo qof walba lala wadaago."
Matt, oo wax ku iibiya online-ka isagoo ka soo kabanaya cudurka kansarka, ayaa ninkaasi ugu deeqay inuu u casriyeeyo cajaladaha qaddiimiga ah, "si uusan uga walwalin inay ka tirtirmaan oo xusuusahaasi ay ugu haraan jiilka dambe."
"Naxariistu lacag kuma fadhiso dunida hadda way u baahan tahay," ayay tiri Kate.
Jim oo ku sugan Brooklyn ayaa sheegay "inay qalbigiisa dhalaalisay" markii ay haweeney isku dayday inay lacag siiso kaddib markii uu u sharxay sida ay aaladda Skype-ka ugala xiriiri karto qoyskeeda oo jooga Japan.
"Runtii waxay ahayd qof caqli badan oo u diyaarsan inay wax barato, ayuu yiri.
Wuxuu intaas ku daray in si bilaash ah wax loogu qabto dadka waaweyn "waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu wanaagsan ee aan weligey sameeyay."
Haweenay boolis ah oo naas nuujisay ilmo la soo tuuray
Haweenay ka tirsan booliska gobolka Karnataka ee dalka Hindiya ayaa lagu ammaanay fal naxariis ah oo ay u sameysay ilmo yar ka dib markii ay naas nuujisay ayna soo badbaadisay.